Momba anay - Shijiazhuang Jinyunxiang Technology Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2000, Shijiazhuang Jinyunxiang Technology Co., Ltd.dia manam-pahaizana manokana amin'ny kodiarana diamondra sy CBN. Amin'ny voalohany,
rehefa miroborobo ny indostria rehetra dia nandrafitra ny orinasa manokana aho taorian'ny fifanakalozan-dresaka tamin'ny rahalahiko.
Izy io no mpandraharaha izay mahalala ny fahasarotan'ny fanombohana orinasa. Eo am-pikarohana ny vola, ny teknolojia ary ny mpiasa izahay.
Soa ihany, lasa miadana tsikelikely ny orinasanay noho ny fandeferan'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fahamarinan'ny fizotran'ny famokarana dia ankatoavin'ny mpanjifa ny vokatra ary manjary matanjaka miadana ny orinasa.
Ny famokarana kodiarana fametahana diamondra ho an'ny boribory miendrika karibonetra. Ny famoahana isan-taona dia latsaky ny 3000 sombiny miaraka amin'ny milina fototra 3.
Miankina manokana amin'ny fikosoham-bary vita amin'ny kodiarana sy ny fitaovana vita amin'ny hazo, ny haavonay dia nitombo 10. Ny isan-taona dia 10000 ny isan-taona.
Ny milina CNC voalohany no nampidirina. Nihabetsaka ny voka-pifidianana, manana ny baikon'ny vahiny voalohany izahay.
Ny milina CNC dia nitombo ho 3, misy 30000 isan-taona. Manomboka mikaroka ny kodiarana vita amin'ny diamondra sy ny kodiarana ho an'ny Cylindrical Grinder izahay. Nitombo henjana ny filaminana avy any ivelany. (PurchasingCylindrical Grinder mba hizaha toetra ny kodiarana)
Manomboka manangana ny zavamaniry manokana izahay, miaraka amina tahiry 50 000 isan-taona.
Nifindra tany amin'ny orinasa vaovao izahay ary nanomboka nanao fikarohana ny kodiarana fanakorontanana CNC.
Niditra teo amin'ny kodiarana fanidiana fikorontanana CNC tamin'ny fomba ofisialy izahay. Ny milina CNC dia novidina mba hitsapana kodiarana. Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka nanatrika ny fampiratiana any Azia Atsimo Atsinanana izahay.
Fitaovana bebe kokoa no ampidirina amin'ny tranobenay izay manana vokatra 120,000 isan-taona. Ny vokatra dia manana fanamafisana bebe kokoa, hanatrika ny lanonana atsimo atsinanana.
Nanolotra sy nanamboatra fanitsiana i Manipulator, niaraka tamin'ny volavolan-taratasy 160 000 isan-taona. Rehefa nihodina ny kodiarana CNC dia nitombo tamin'ny sehatra vaovao ny kodiarana. Tamin'ity taona ity, nanomboka nanao fikarohana kodiarana mifangaro seramika izahay amin'ny fikapohana vy sy kodiarana amin'ny fikosoham-bary. Amin'ny alàlan'ny fanatrehana fampirantiana manerana an'izao tontolo izao, ny fahalalana matihanina be dia be.
Tamin'ny faran'ny taona 2019, noho ny fahamatorana amin'ny lafiny rehetra, ny vokatra isan-taona dia nitombo ho 200.000 sombiny. Taorian'ny fandraisana anjara tany Allemagne, ny fampirantiana an'i Tiorkia, dia nampidininay tamin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny eropeana.
Ny fanohanan'ny mpanjifany izany trosa izany amin'ny zava-bitantsika. Izahay dia manantena fatratra miaraka aminao!
1.ny kodiarana mitoto fikosoham-bary mifono vy.
2.diamond kodiarana miforitra ho an'ny antsasa.
3.misy kodiarana miforosana ho an'ny fitaovana karbônina maro
4.misy kodiarana fanosihosena kodiarana vita amin'ny Cermet tady boribory.
5.diamond sy CBN kodiarana miforitra ho an'ny Cylindrical Grinder.
6.diamond na CBN kodiarana tsy misy fotony.
7.diamond kodiarana fikorotanana ho an'ny mpanapaka Cermet milling.
8.diamond kodiarana mitoto ho an'ny fitaovana matevina karbônina mafy.
9. fitaovana fikosoham-bary mifamatotra ho an'ny fikorotan'ny sodina.
10.diamond sy CBN kodiarana miforitra ho an'ny tsipika vy-cutting Band Saw.
Raha liana amin'ny vokatrao izahay dia alefaso mailaka izahay. Manantena fatratra izahay hiara-hiasa aminao.
Maitso kodiarana ho an'ny famonosanana, Carbide boribory ny vatan-tsolika vita amin'ny vy manapaka, Fomba fikosoham-bary diamondra ho an'ny tungeta karbàla, 5inch famatorana kofehy famatorana kodiarana ho an'ny famonosana fitaovana famonosana baoritra, Familiana kodiarana ho an'ny fitaovana famonosana, Fanadiovana kodiarana diamondra / Cbn fanadiovana kodiarana ho an'ny fitaovana fanangonam-bolo,